ICuba kanye nemvelaphi yegama layo | Ukuhamba kwe-Absolut
Daniel | 15/04/2021 12:27 | Kubuyekezwe ku- 15/04/2021 13:27 | Cuba
Kuyisiqhingi esikhulu kunazo zonke e-Antilles futhi ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zezivakashi eCaribbean. Indawo eyingqayizivele nekhethekile ngezizathu eziningi kangaka nomlando omude nothakazelisayo. Kepha, Livelaphi igama leCuba? Uyini umsuka wegama lalo? Lona ngumbuzo esizozama ukuwuxazulula kulokhu okuthunyelwe.
Iqiniso ukuthi umsuka we-etymological wegama Cuba akucaci nakancane futhi kusengundabuzekwayo phakathi kwezazi namuhla. Kunokucabanga okuningana, okunye kwamukelwa ngokwengeziwe kunamanye, kanti amanye awo afuna ukwazi ngempela.
Okokuqala, iphuzu elibalulekile kumele licaciswe: nini UChristopher Columbus Wafika esiqhingini okokuqala (ngo-Okthoba 28, 1492), akakaze acabange ukuthi ubekade ehamba unyawo ezwenikazi elisha. Eqinisweni, ngokwezibalo zabo eziyiphutha, lowo mhlaba omusha ungaba yiCipango kuphela (njengoba iJapane yayaziwa kanjalo ngaleso sikhathi), okwakungabhekwa ukuthi kungenzeka yini ukubhabhadisa isiqhingi nganoma iyiphi indlela.
UChristopher Columbus wafika kulesi siqhingi ngo-Okthoba 28, 1492, ezwa okokuqala igama elithi "Cuba" livela emilonyeni yabantu bomdabu.
Eminyakeni edlule, abaseSpain banquma ukuqamba lokhu okutholakele ngegama le- Isiqhingi saseJuana, ukuhlonipha iNkosana encane uJohn, okuwukuphela kwengane yowesilisa ka- Amakhosi amaKatolika. Noma kunjalo, leli gama alibambanga. Ngokungangabazeki, lokhu kuthonywe iqiniso lokufa ngaphambi kwesikhathi ngo-1497 komuntu owabizwa ukuba abe ngumlandeli wesicoco, eneminyaka engu-19.
Ngemuva kwalokho, ngesinqumo sasebukhosini sangoFebhuwari 28, 1515, kwenziwa umzamo wokuthi igama elisemthethweni laseCuba kwaba lelo Isiqhingi saseFernandina, ukuhlonipha inkosi, kodwa igama lendawo alizange libambe. Eqinisweni, izenzo ezisemthethweni zengxenye yesibili yekhulu le-XNUMX kuphela zibhekisela kule nsimu ngaphansi kwegama leCuba.
1 Imvelaphi Yomdabu
2 Ukucabanga okufunayo ngemvelaphi yegama elithi Cuba
2.1 Umbono wamaPutukezi
2.2 Umbono wama-Arabhu
Namuhla incazelo eyamukelwa kakhulu yombuzo othi "livelaphi igama leCuba" yilelo imvelaphi yomdabu.
Abantu abaningi baseCuba bayawuthanda umqondo wokuthi igama lezwe labo livela egameni elidala lomdabu: kuba, isetshenziswe mhlawumbe ngolimi olukhulunywa yi- AmaTainos. Leli gama lingasho "Umhlaba" noma "ingadi." Ngokwalo mbono, bekungaba nguColumbus uqobo owayezozwa okokuqala leli hlelo.
Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi leli gama elifanayo lasetshenziswa abanye abantu bomdabu bakwezinye iziqhingi zaseCaribbean, izilimi zabo ezazivela emsukeni owodwa, umndeni wolimi lwama-Arauca.
Livelaphi igama leCuba? Ngokusho kwabanye ochwepheshe, kungabhekisela ezintabeni nasezintabeni
Ngaphakathi kwe-hypothesis efanayo yomdabu, kunokunye okuhlukile okuphakamisa ukuthi incazelo yaleli gama ingahle ihlobene nezindawo lapho ukuphakama nezintaba kugcwele khona. Lokho kubonakala kukhonjiswa ngamanye amagama ezindawo efanelekile ku- ECuba, eHaiti naseDominican Republic.
Ubaba I-Bartolomé de las Casas, owabamba iqhaza ekunqotshweni nasekushunyayelweni kwevangeli esiqhingini phakathi kuka-1512 no-1515, uveza emibhalweni yakhe ukusetshenziswa kwamagama athi "cuba" nelithi "cibao" njengezincazelo zamatshe amakhulu nezintaba. Ngakolunye uhlangothi, kusukela lapho kuze kube namuhla igama lomdabu le- I-Cubaanacan ezifundeni ezinezintaba enkabeni yezwe naseMpumalanga.
Ngakho-ke igama leCuba lizoba ngesinye sezimo lapho indawo inika igama layo ezweni. Ngeshwa, ukungabi nalwazi kwethu okwamanje ngezilimi zaseTaíno nase-Antillean kusivimbela ekuqinisekiseni lokhu ngokugcizelela.
Ukucabanga okufunayo ngemvelaphi yegama elithi Cuba
Yize kunokuvumelana okuthile phakathi kwezazi-mlando nezazi zezilimi mayelana nokuthi igama laseCuba livelaphi, kuneminye imicabango yokufuna ukwazi okufanele ishiwo:
Kukhona futhi i- Umbono wamaPutukezi ukuchaza lapho livela khona igama leCuba, yize okwamanje lingabhekelelwa. Ngokwalo mbono, igama elithi "Cuba" livela edolobheni eliseningizimu yePortugal elibizwa ngalelo gama.
Isifanekiso sikaColumbus edolobheni lasePutukezi laseCuba
I- "Cuba" yasePortugal itholakala esifundeni se Baixo Alentejo, eduze kwedolobha laseBeja. Ngenye yezindawo ezithi yindawo yokuzalwa yaseColumbus (empeleni kunesifanekiso somtholi edolobheni). Umqondo osekela lo mbono ukuthi kungaba nguye owayezobhabhadisa isiqhingi saseCaribbean ngenkumbulo yezwe lakubo.
Yize kuyinkolelo-mbono enelukuluku, ayinakho ukuqina komlando.
Okuvelele kakhulu kunokwedlule, noma kunjalo kunabasekeli abathile. Ngokusho kwakhe, igama eliphakeme elithi “Cuba” kungaba ukwehluka kwe- igama lesi-arabic koba. Lokhu kwakusetshenziselwa ukuqoka ama-mosque aqoshwe nge-dome.
Inkolelo yama-Arabhu isungulwe endaweni lapho kufika khona uChristopher Columbus, i- IBariay bay, njengamanje esifundazweni saseHolguín. Lapho bekungaba yizimo ezicijile zezintaba eziseduze nogu ebezizokhumbuza itilosi lelo lama-Arab kobas.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » ICuba kanye nemvelaphi yegama layo
Amaswidi nama-dessert ajwayelekile aseMorocco